घर युरोपियन स्टार रुबेन लफ्फुस-चेक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "Cheeky"। हाम्रो रूबेन लफ्फुस-चेक बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्न समावेश छ।
हो, सबैले बल को बिरुद्ध बल को बनी बखत सम्पत्तिका को लागी उनको क्षमता को बारे मा जान्दछ। तथापि, केवल केहि केहि Ruben Loftus-Cheek को जीवनी मा विचार छ जो एकदम रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रूबेन आईरा लफ्फुस-चेक जनवरीको 23rd, लेयुशम, लन्डन, संयुक्त अधिराज्यमा 1996 जनवरीको जन्म भएको थियो। उनी एक ब्रिटिश आमा, जूलियट चेक र गुइनेसियन बुबा, ट्रेवर लोफ्फस (बुबा) जन्मेका थिए। रूबेन लफ्फुस-चेक गुइनेसियन मूलको हो।
NOTE: गुयाना दक्षिण अमेरिकाको उत्तर अटलांटिक तटमा एक अंग्रेजी बोल्ने देश हो। देश कैरेबियन क्षेत्रमा सांस्कृतिक रूपमा जोडिएको छ। लफ्फुस-चेकेका पिता, ट्रेवर लोफ्टस गुयाना छोडेर आफ्ना तीन जना छोराछोरीसँग बेलायत गए।
लफ्फुस-चेक आफ्नो बचपनको समयको दौडान एक छिटो शिक्षाको रूपमा देखा पर्यो। उनले प्राइमियर लीगमा खेल्ने आफ्ना ठूला भाइहरूको पालना गरे। रूबेन, डोमिनिक सोलंका संग तल चित्रित, Abramovich र टमी अब्राहाम चेल्सी युवा अकादमीमा उत्कृष्ट सुरुवात भएको थियो।
पिचमा आफ्नो बुद्धिको लागि प्रख्यात, उनले अपेक्षाकृत लामो र बलियो बनायो र पुरानो खेलाडीहरू आफ्नो पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थे। यसले पदोन्नति र सफलताको नेतृत्व गर्यो जसले उहाँलाई आजको स्थितिमा उत्प्रेरित गर्यो।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
यद्यपि रूबेन एक्लै छ, उनी एक पटक अंग्रेजी मोडेल, टेलिभिजन व्यक्तित्व र प्रेन्टेन्जर फर्न म्याककनसँग जोडिएको थियो जसले एकपटक ट्विटरमा रहस्य फुटबललाई सन्देश पठाउँथ्यो।
बोल्दै सूर्य उनको प्रेम जीवनको बारेमा TOWIE स्टारले दावी गरे:
"कसैले चहचहानामा मेरो सिधा सन्देशहरूमा कसैले केही हल्लायो! म को भन्न जाँदैछु। उहाँ मेरो रहस्य फुटबल हुनुहुन्छ। "
जब उनले बदाम को तहत विनिमय राखने कोसिस गरे, जांच रिपोर्टहरु ले भन्यो कि रूबिन लफ्फुस-चेक अन्तिम व्यक्ति फर्न थियो (सोशल मीडिया साइट मा)।
यस तथ्यले थप तथ्यलाई बलियो बनायो कि त्यहाँ उनीहरुको पछिल्ला 1000 व्यक्तिहरुमध्ये धेरै फुटबलरहरू थिएनन्। यस बीच, रुबिन अझै पनि प्रेम आइल्याण्ड 2017 विजेता, एम्बर डेविस को लिङ्क को बावजुद एकल छ कि संदेश को माध्यम ले फुटबल प्रतिभा संग बंद गर्न को प्रयास गरे।
उनले रुबिनको बारेमा पनि उनीहरूलाई एक साक्षात्कारको बेला पनि फुटबलमा सोचेका थिए।
उहाँ अविश्वसनीय हुनुहुन्छ। मैले मेरो जीवनमा यस्तो केहि पनि देखेको छैन। उहाँ पूर्ण बेब हुनुहुन्छ, (sic)।
उनले टिप्पणी गरे।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उहाँको लागि दुई पटक बिजुली बत्ती
एक बिजुली बोल्ट जुन 2016 मा रूबनको घर मा एक बहादुरी लगाइयो, दोस्रो पटक को लागी जो रूबेन र उनको परिवार मा आमा प्रकृति को सामना गरे।
11 वर्ष पहिले, त्यही घर अझै पनि बिग्रिएको थियो। र तिनीहरू भन्छन् कि बिजुली कहिल्यै दुई पटक आक्रमण गर्दैन ... हम्म ...
ट्रुथ: पुरानो भन्नाले 'बिजुली कहिल्यै हडताल छैन उही स्थान दुई पटक' अर्को मिथक हो जुन कुनै पनि दिग्गज तूफान पर्यवेक्षक वा शोधकर्ताले प्रकृतिको हस्तक्षेप देखेको छ। यो रूबिन लफ्फुस-चेक को मामला हो। वास्तवमा, पर्याप्त समय दिइएको छ, यो वास्तवमा अपरिहार्य छ। बिजुलीले एक चोटी भन्दा बढी स्थान हड्ताल गर्न सक्छ।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
उहाँले 8 को निविदा उमेरमा चेल्सी एफसी जवान अकादमीमा सामेल हुनुभयो। एक हिप चोट हटाउन अघि आफ्नो क्यारियर को शुरुवात मा प्रभावित भयो, जसबाट उनले बरामद गर्यो। त्यस पछि, उनले क्लबलाई प्रभाव पारे। उनले चेल्सी अन्तर्गत 18s को लागि आफ्नो पहिलो बनाउनुभयो जब उनी केवल 14 थिए। Loftus-Cheek चेल्सी पक्षको भाग थियो जसले 2015 मा यूईएएफ युवा संघको फाइनलमा जित्यो टमी अब्राहाम र डोमिनिक सोलंका।
उनको जवान टोलीमा उनको राम्रो प्रपत्रको लागि धन्यवाद, लोफ्टस-चेक एक वर्षको एक्सएनएनएक्सएमएमएक्स डलरमा एक वर्षको तुलनामा इनाम दिइएको थियो जब त्यो केवल 1.7 वर्ष थियो। यो Chelsea वरिष्ठ टोली को पदोन्नति संग युग्मित भएको थियो। रुबेन लफ्फुस-चेकलाई चेल्सीको सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ ट्याब्लेइड अप्रिय। केही आलोचकहरूले यसलाई भनिन् 'आधुनिक फुटबलमा एक श्राप'।
वास्तवमा, £ 1.7million एक वर्ष सम्झौता निश्चित रूपमा रुबेन लफ्फुस-चेकले वित्तीय रूपमा सुरक्षित जीवनको लागि सुरक्षित बनाउँछ बन्चलाई तापनि र प्रारम्भिक रूपमा, चेल्सा पहिलो-टोलीको लागि मिल्दोजुल्दो कहिल्यै प्रदर्शन नगरेको।
आफ्नो नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा, लोफ्टस-चेकले भने:
"क्लबले मेरो लागि यति धेरै कमाई गरेको छ किनभने मैले यहाँ आठौं वर्षको रूपमा सुरु गरें र अब म विश्वासलाई तिर्नु पर्दछ जसले पिचमा मेरो प्रदर्शनको साथ मलाई देखाउँदछ।"
त्यसोभए, उनले हालको साथ हालको लागि एक नाम बनाएको छ इंग्लैंड नेशनल टीम.
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
रूबेन लोफ्फस चेक एक धनी परिवारको पृष्ठभूमिबाट आउँछ। तिनका ठूला भाइहरूले जोडेका फुटबल खेलाडीले आफ्नो चोटीमा धेरै पैसा कमाए। यो उनको परिवारको सम्पत्तिको लागि जिम्मेवार थियो।
उनको पिता, ट्रेवर लोफ्फसले भर्खरै दावी गरे Jose Mourinho उनको छोरालाई चेल्सीमा फिर्ता लिइयो। ट्रेवरको बाहिर झण्डा Jose Mourinho स्टामफोर्ड ब्रिज मा उनको मिडफिल्डर पुरूष को कथित गरीब उपचार मा आयो। उनको शब्दहरुमा ...
'उसले खेल्नुपर्छ। सबैजना दृश्यहरू पछि सोधिरहेका थिए: "किन त्यो खेलिरहेको छैन? ... यदि रूबन खेलिरहेको थियो Mauricio Pochettino, उसले 70, 80, 90 अहिले सम्मको टीममा देखा पर्नेछ। '
महिना पछि, ट्रेवरले धन्यवाद दिए एन्टोनियो कन्टे लफ्टस-चेकि पठाउनको लागी क्रिस्टल महल को लागि एक सीजन-लामो ऋण जो प्लेयरले आफूलाई रिडिम गर्न प्रयोग गरेको थियो। ट्रेवरले जोस मोरहोनोको आलोचना गर्न द्रुत भएको थियो तर यो तथ्य बिर्सनुभयो कि यो जोस थियो जसले लोट्टोस-चेकले 2014-15 मा चेल्सीको खिचाइमा विजय हासिल गर्न तीन पटक खेल्न पछि पदकलाई दिए।
मातृभाषा: जूलियट चेक रुबेन लफ्फुस-चेक को ब्रिटिश आमा हो। उनी घरपरिवार हुन् जुन उनको घरको बचतको लागि एक पटक प्रशंसा गरिएको थियो जब यसको छत बिजुलीको बिर्सेको थियो।
रुबेनको मा-जूलियट चेक
रुबेन लफ्फुस-चेकका तीन आधा भाइहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो वेन कर्ट हो, एक सेवानिवृत्त फुटबल खेलाडी जसको करियर राम्रो तरिकाले ज्ञात थिएन, आफ्ना भाइबहिनीहरूको विपरीत।
रुबेन लफ्फुस-चेकको दोस्रो सबैभन्दा पुरानो आधा भाइ कार्ल कर्टको जन्म नोभेम्बर 1 को 1977 मा भयो। उहाँ अंग्रेजी-जन्मे ग्वाइनेस पूर्व फुटबलर हुनुहुन्छ जो अन्तिम पटक उत्तरी अमेरिकन फुटबल लीगमा ताम्पा खाडी रोडीका लागि अगाडि बढ्नुभयो। उनले पहिले विम्बलडन, लिंकन सिटी, न्यूकसल युनाइटेड, वल्वरहामप्टन वान्डरर्स, लेसेस्टर सिटी, यूडी मार्बल र नोर्भिच शहरका लागि खेलेको छ।
अर्को पुरानो आधा भाइ, लियोन कर्टले बोल्टन वान्डर्सर्स एफसी लियोन कोर्टको लागि स्क्यानआउट गर्दै एक गुयानाजस्तो फुटबल खेलाडी हो जसले खेलाडीको रूपमा खेलेको छ। उहाँ कार्ल कर्टको सानो भाइ र रूबिन लोफ्फस-चेकको साँचो आधा भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ सामेल हुनुभयो क्रिस्टल महल शामिल हुनु अघि 2006 को गर्मीहरु स्टोक सिटी अक्टोबरमा 2007। उनले पनि बर्नले, प्रेस्टन नर्थइन्ड र चार्ल्टन एथलेटिकको लागि खेले।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनको आइडल
खेलकुद शैलीको सन्दर्भमा चेल्सीका लागि लफ्टस-चेकले क्लबको नयाँ माइकले बलकको रूपमा लिङ्ग गर्दै गरेको छ, उनी धेरैका साथ बल्डोजोजिङ मिडफिल्डरसँग पेट्रिक भिइरा जस्ता छन्।
लुफ्फस-चेक- आजको प्याट्रिक वेरा
आफ्नो FA जैव भन्छिन् कि यो भन्दा राम्रो हामी भन्दा सक्छ। उनीहरूको शब्दहरु मा ...
"6ft माथि 4IN लामो, Loftus-Cheek सम्झन गाह्रो छ। एक टाउको, शारीरिक रूपले बक्स-देखि-बक्स मिडफिल्डर लागू गर्दै, उनीसँग शक्ति र सुन्दरताको अभाव छ र एक पास छनौट वा टेकमा राखिएको क्षमताको दुर्लभ संयोजन छ। एक वास्तविक सब-गोल। "
जर्मनी लेजेंन्ड माइकल बलकैक अझै पनि उनको प्रेरणा बनी रहन्छ। लफ्फुस-चेकले एक पटक भने।
"मेरो युवा प्रशिक्षकहरूले सधैं भनिन्, 'चेल्सी र जर्मन खेलहरू हेर्नुहोस्, ब्लाक हेर्नुहोस् !!!' "
रूबेन लफ्फुस-चीक भूमिका मोडेल
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बार्सिलोना एकपटक उनलाई साइन इन गर्ने प्रयास गरियो
जब तिनीहरू सबै भन्दा राम्रो जवान खेलाडीहरूको थकित भए पनि युरोपियन प्रतिद्वंद्वीहरूद्वारा चिनिन्छन् (उदाहरणका लागि, Cesc Fabregas), बार्सिलोना इंग्ल्यान्डमा आउन र 2012 मा बदला लिन निर्णय भयो रूबेन लफ्फुस-चेक को कब्जा चेल्सी बाट।
यो वेल्सको विरुद्ध उनको इङ्गल्याण्ड यूएक्सएनएमएमएक्स म्याचको लागि उनको गोलको प्रदर्शन थियो बारका छ आँखाहरु। यसकारण चेल्सी फर्ममा राखिएको र लामो समयसम्म सम्झौतामा रुबेनलाई हस्ताक्षर गरे।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -एक पटक उसलाई धोखा दिए
Ruben Loftus-Cheek को रूप मा हाल नै मा हेरिएको पर्याप्त राम्रो विचार गर्न सकिन्छ। यद्यपि, फिफा 15 द्वारा उनको फुटबल प्रदर्शन को गंभीरता से डाउनग्रेड गरिएको थियो।
तथापि, यो देखिन्छ न्यायलाई क्रमिक रूपमा सेवा गरिरहेको छ किनकी फिफा 18 मा हालको दर्जा एक प्रभावशाली अपग्रेड हो जसले अझै धेरै चाहेको छ।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -यदि त्यो फुटबलर थिएन भने, त्यो तपाईं YouTuber हुनुहुनेछ
वैकल्पिक ब्रह्मामा, Loftus-Cheek एक तारा हुन सक्छ YouTuber जस्तै उहाँले एक सुरुवात गर्नुभयो YouTube च्यानल त्यो उनको मोजे को बल संग राख अप खेल र उनको बगैचा मा एक DIY फीफा 15 कौशल खेल को रूप मा देख्यो।
फुटबलले फोन गरिरहेको थियो - लफ्टसस-केक एक कम्युनिष्ट भएको थियो
दुर्भाग्यवश, फुटबल फुटबलको प्रतिज्ञाको कारण अहिलेसम्म साता सातादेखि छुट्याइएको छैन।
Ruben Loftus - Cheek Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -हरेक6खेलहरू पछि एकपटक एक नयाँ मालिक भेटियो
आफ्नो पहिलो 30 प्रीमियर लीग खेल खेल्नको लागि, लफ्टस-चेकले उनलाई Xaching को कुल6प्रबन्धकहरुलाई देखाउँदै देखे। यसमा जोस मोरहोन्ह (चेल्सी एफसी), गुओस हिडकिंक (चेल्सी एफसी), एन्टोनियो कन्टे (चेल्सी एफसी), फ्रैंक डे बोअर (क्रिस्टल पैलेस र रोय होडसन (क्रिस्टल महल) शामिल छन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Ruben Loftus-Cheek पढ्नको लागि धन्यवाद बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
1 कसरी लेखकहरू
रूबेनको सानो भाइ छैन?
मतदान गर्नुहोस्0तल मत दिनुहोस् जवाफ